Real Madrid, Barca Mise Atletico - Kooxdii Toddobaad Oo Maanta Ka Baxaysa Tartanka Super League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueReal Madrid, Barca Mise Atletico – Kooxdii Toddobaad Oo Maanta Ka Baxaysa Tartanka Super League
Real Madrid, Barca Mise Atletico – Kooxdii Toddobaad Oo Maanta Ka Baxaysa Tartanka Super League
April 21, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxdii ugu horreysay ee reer Spain ah ayaa maanta la filayaa in ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo in ay ka baxdo tartanka Super League ee ay kooxaha waaweyni ku dhawaaqeen Axaddii in ay samaysteen.
Tartankan oo ay aas-aaseen 12ka kooxood ee Real Madrid, Barcelona, Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Manchester United, ayaa waxa xalay iskaga baxay lixda naadi ee Ingiriiska ah, taas oo ka dhigan in lix kooxood oo kali ahi kusoo hadheen.
Tirada kooxaha kusii hadhaya Super League ayaa maanta sii yaraan doona, waxaana ka bixi doonta koox reer Spain ah oo iyaguna aan la dhacsanayn tartankan oo la kulmay mucaaradad badan.
Real Madrid oo semi-finalka Champions League u gudubtay, usbuuca dambena la ciyaari doonta Chelsea ayaa waajahaysa walaac ah in ay suurtogal tahay, in UEFA ay ka saarto oo ay ka ganaaxdo kulamada ka hadhay tartanka Champions League, laakiin madaxweyne Florentino Perez ayaa ka gaws-adaygaya in uu qaato go’aanka kooxaha Premier League oo kale.
Sababta ugu weyn ee uu Perez iskugu sii dhejinayo tartankan ayaa waxay tahay, in uu loo doortay guddoomiyaha Super League, sidaas darteedna illaa daqiiqadda ugu dambaysa uu ku jiri doono, taas oo caddayn u ah in aanay Real Madrid ahayn kooxda maanta ka baxaysa.
Sida ay warbaahinta Spain tabisay, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka fiirsanaysa in maanta oo Arbaco ah ay iskaga baxdo tartanka Super League.
El Partidazo de Cope ayaa shaacisay in ay heshay macluumaad buuxa oo u xaqiijinaya in Atletico ay tartankaas dibedda ka noqonayso maanta oo ay raacayso dariiqa kooxaha Premier League.